क्याम्प फराकिलो बनाउँदै खड्का, शूक्ष्म अभियानमा थानी – Karnalitimes
क्याम्प फराकिलो बनाउँदै खड्का, शूक्ष्म अभियानमा थानी
कर्णाली टाइम्स शनिबार, मंसिर ६, २०७७
इत्रामस्थित निवासमा नेता कार्यकर्तासँग तस्बिर खिच्दै महामन्त्री खड्का
सुर्खेत । मंसिर लागेसँगै बढ्न थालेको मौसमी चिसोलाई कांग्रेसको राजनीतिले ‘च्यालेन्ज’ दिन थालेको छ । सुर्खेतकाे कांग्रेस राजनीतिमा आसन्न महाधिवेशनकाे सरगर्मी ह्वात्तै बढेकाे छ । पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको गृहजिल्ला र कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्ला भएकोले पनि सुर्खेतमा धेरैको चासो छ । सुर्खेतलाई केन्द्रमा राखेर कर्णाली टाइम्सको केही सिरिजमा कांग्रेसको आगामी अधिवेशनबारे चर्चा गरिनेछ ।
सबैभन्दा पहिले ‘खड्का-थानी गुट’ मा रुमल्लिएको सुर्खेती कांग्रेस राजनीति र पछिल्लो प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाबारे केही चर्चा गरौं । कांग्रेसको आन्तरिक र देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा अग्लो कद बनाएका नेता भए पनि महामन्त्री खड्काको लागि करिब ५ वर्षअघि सम्पन्न गृहजिल्लाको अधिवेशन नमिठो बन्यो । उनले चुनावमा मतदान नगरे पनि समर्थन गरेका उम्मेदवार यज्ञबहादुर बिसीले झिनो मतले पराजय भोगे । नेता हृदयराम थानीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका कमलराज रेग्मी सभापति बने ।
पार्टीको भावि सभापति र प्रधानमन्त्री हुने हैसियत बनाएका नेताको लागि आफ्नै गृहजिल्लामा आफ्नो अनुकूल नेतृत्व नहुनु भन्दा अप्ठेरोपन के हुन सक्छ ? खड्काले पनि यसको महसुस गरे । र, अधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्षमै करिब २ दसकसम्म जिल्लाको पार्टी नेतृत्व हाँकेका तप्तबहादुर बिष्टलाई आफूतिर ताने । जिल्ला अधिवेशनमा रेग्मीको पक्षमा बिष्ट यति कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए कि, उनले लाइनमा लागेका पश्चिम सुर्खेतका मतदातालाई भनेका थिए– ‘कमल रेग्मी मै हुँ, मलाई भोट दिनुहोला ।’ सभापतिका अर्का उम्मेदवार बिसी र बिष्ट बिगतमा एउटै टिममा रहनु र क्षेत्र पनि एउटै हुुनुले पश्चिम सुर्खेतका भोट बिसीतिर जाने संभावना थियो । त्यही संभावनाबीच बिष्टले आफूलाई रेग्मीको बिम्बको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
हुन त बिष्ट लामो समयसम्म खड्कासँगै थिए । नेपाली कांग्रेस विभाजन हुँदासमेत उनी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति थिए । पछिल्लो समय थानी टिम (तत्कालीन संस्थापन पक्ष) मा गएका बिष्टलाई आफ्नो क्याम्पमा भित्र्याएर सुरु गरिएको खड्काको नेता तान्ने अभियानमा अहिले जिल्लाका थुप्रै पुराना र युवा नेताहरु गोलबद्ध हुन थालेका छन् । बिष्टको टिममा रहेका जिल्ला सचिव टोपबहादुर रावत, क्षेत्रीय सभापति लालविर भण्डारी, पूर्वकोषाध्यक्ष गोविन्द कोइराला, पूर्वसहसचिव डिल्लीराम पाठकलगायत खड्का क्याम्पमा पुगेका छन् ।
अहिले महामन्त्री खड्का सुर्खेतमै छन् । कांग्रेसीको लागि ‘कर्णालीको बालुवाटार’ भनिने इत्रामस्थित खड्का निवासमा चहलपहल र रौनक निकै बढेको छ । बिष्टजस्तै बिगतमा खड्काको साथ छोडेका पूर्वसचिव श्याम भारती पनि खड्का क्याम्पमा फर्केका छन् । केही समय थानीसँगै हिँडेका कालिप्रसाद शाक्य त उहिल्यै खड्का क्याम्पमा फर्किसकेका छन् । वीरेन्द्रनगरका नगर सभापति र नगर प्रमुखसमेत रहेका देवकुमार सुवेदी पनि खड्का क्याम्प नजिक पुगेका छन् । केन्द्रमा गगन थापासँग पनि उत्तिकै निकट मानिने उनले ‘अब मेरो नेता पूर्णबहादुर खड्का’ भन्न थालेका छन् ।
आसन्न महाधिवेशनमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने अनुमान गरिएका खड्का यसपटक जिल्ला र प्रदेशमा समेत आफू पक्षलाई नेतृत्वमा पु¥याउने अभियानमा लागेकोमा कुनै शंका छैन । यद्यपि उनको लागि नेताहरुको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण चुनौती हुने देखिन्छ ।
पश्चिम सुर्खेतकाे चाैकुनेमा कार्यकर्ता भेलामा केन्द्रीय सदस्य थानी
खड्काले नेताहरुलाई आफ्नो क्याम्पमा भित्र्याइरँदा जिल्लाको पार्टी राजनीतिमा उनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी हृदयराम थानी भने शूक्ष्म अभियानमा सक्रिय छन् । गत महाधिवेशनमा पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य भएका भए पनि जिल्लाको राजनीतिमा थानीको प्रभाव बलियो छ । साविकको सुर्खेत क्षेत्र नं. २ उनको विशेष प्रभाव क्षेत्र हो । कुशल संगठकको रुपमा पहिचान बनाएका थानीले पछिल्लो समय साविकको क्षेत्र नं. १ र ३ मा आगामी जिल्ला अधिवेशनलाई लक्षित गरी अभियान तीब्र बनाएका छन् । पार्टीका जिल्ला सभापति आफ्नो पकडमा हुनुको लाभ उनले पर्याप्त मात्रामा उठाएका छन् । थानीको टिम चुस्त र चलायमान छ । उनी एक–एक क्रियाशील सदस्यलाई लक्षित गरेर अभियानमा हिँडिरहेका छन् । उनले कुन नेता/कार्यकर्तालाई कुन ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजनासमेत बनाइसकेका उनी निकटको भनाइ छ ।
साविकको क्षेत्र नं. ३ मा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता शिवराज जोशी थानीको अभियानका प्रमुख सारथि हुन् । यद्यपि निर्वाचन क्षेत्र विभाजन हुनुपूर्व (२०५६ सालअघि) थानी स्वयंले पश्चिम सुर्खेतमा संगठन निर्माण गरेको हुनाले पनि उनको लागि त्यति गाह्रो छैन । साविकको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा कार्यकर्ता आकर्षित गर्ने अभियानमा लागेका उनको लागि साविकको क्षेत्र नं. २ मा भने आफू पक्षीयलाई जोगाउने चुनौती रहेको छ । यद्यपि पहिलोपटक जिल्लाको पार्टी राजनीतिमा देखिने गरी लागेका खड्का र बिगतदेखि नै स–साना मामिलामा समेत हात हाल्दै आएका थानी समूहबीचको आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धा कस्तो होला भन्नेबारे अहिल्यै आँकलन गर्न हतारो हुनेछ ।
Prevबोटेचौरमा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु, आफन्तद्वारा छिन्चु–जाजरकोट सडक अवरुद्ध
Nextकर्णालीका १३६ उजुरीमाथि वेपत्ता छानविन आयोगको चारवटा समुहले अनुसन्धान गर्दै